I-Privorot yindlela ephumelelayo yokuthanda umlingo kunye nenkonzo ethandwa kakhulu ekuthengeni abathengi kumalimi. Isetyenziselwa ukubuyisela ubudlelwane beentsapho, ngenjongo yokuyeka ukungcatsha kwamanye amaqabane kunye nokuphindezela. Kodwa isizathu esona siqhelo sokusebenzisa uncedo lomlingo alubonakali uthando. Ukuqhagamshelana namanye amabutho asemhlabeni akude ahlale engenalutho, nangona umthengi ethatha isigqibo sokusebenzisa iinkonzo zeengcali. Ziyingozi kangakanani imiphumo yeentlobo zombini? Ukuze uphendule lo mbuzo, umntu kufuneka aqonde indlela iindlela zokuziphatha ezikhuselekileyo zihluke kwiingozi.
Uhlobo lwesithandwa sothando kunye nemiphumo yabo
Izwe liyakuthanda. Ngaphantsi kwesi sigaba siwela othandweni lweentsimbi kunye noluntu, kuquka ukutya nokusela, iipads, ukuxela emva kokunye. Ngokuqhelekileyo zenziwa ngokuzimela ngaphandle kokusebenzisa abenzi bemilingo. Imiphumo emibi ingavela xa isithethe singenziwanga ngokuchanekileyo (ukungaphelelanga okanye ukuphazanyiswa ngokulandelelana kwezenzo, ukungalunganga kunye neephene ekufundeni itekisi). Impazamo ekuthandeni imilingo ibanjwe nexhoba lokuthanda ukupela. Ngokuqhelekileyo, oku kuchaphazela impilo yakho: ukunganakwa, ukuxinezeleka, kunye nephunga. Okuyinkimbinkimbi ngokwesiko, imiphumo embi kakhulu kumacala omabini.
Uthando olumhlophe luchaza. Ngaphantsi kwesi siqhelo, iinkqubo zokudibanisa ubudlelwane, ukuxolelana kunye nokunciphisa iingxabano ziwa. Isimo esiphezulu sokubamba iimpawu ezimhlophe kukuba kukho ukuxhamla ngokomzwelo nangokwenyama phakathi komthengi kunye nenjongo yempembelelo. Ngako oko, abantu abatshatileyo okanye abanobudlelwane bexesha elide badla ngokubhenela kubo. Iirejista zolu hlobo ziyahambelana nokuphindaphinda imithandazo okanye ukubethelwa ngesikhalazo kwimikhosi yokukhanya. Zibhekwa njengezona zikhuselekileyo, kodwa kwezinye iimeko ziyakwazi ukulimaza umdla. Abantu abanamandla aphantsi okuba nezifo ezinobulwelwe emva kokusebenza komlingo. Nangona kunjalo, oku kuqwalaselwa ngokuqhelekileyo emva kokuziphatha kweendlela eziqhakazileyo. Ukutshatyalaliswa kwexesha elifutshane lokuphila akufanele kubangele ukukhathazeka. Kodwa ukuba umntu sele esele athonywe ngumlingo, isithethe esongezelelweyo siya kuphazamisa imeko. Ngako oko, ngaphambi kokuba enze i-spell emhlophe, i-esotericists bayacetyiswa ukuba benze imilingo "yokuhlanjululwa".
Black privoroty. Uluhlu olubanzi kakhulu lwenkonzo yobuqhetseba yothando lomlingo. Banobunzima obunzima bempembelelo, bajoliswe ekunciphiseni ukuthanda komnye umntu, banako ukudala ukukhangwa kwezesondo eziqinileyo. Imiphumo emva kokuziphatha kwabo ayisoloko ilinganiseki kubo bonke abathengi kunye nexhoba le sipelo. Ngokwahlukileyo ukwahlula:
Imikhosi yamangcwaba (ebanjwe kwidilesi emva kwelanga). Efanelwe ngumphumo ohlala ixesha elide. Ezinye zazo azisuswanga kwaye zisebenze kuwo wonke umphefumlo wexhoba. Amandla angama-necrotic kunzima ukunyamezela. Uba ngumxinezeleko, izifo ezingapheliyo zibuhlungu, ukungabonakali kubonakala, kwaye amandla enamandla ayancipha. "Ukutshitshisa umtsalane" kunokuxhomekeka kumthengi. Kulo moya wenyama, ukuwohloka kwezempilo, ukuhlaselwa kwintengiso kunye nokulahlekelwa kwemali kunokwenzeka.
Imikhosi yamaDemonic (eqhutywe ngefowuni yamabutho amnyama). Benza ngokukhawuleza, bangela izifiso ezinamandla, ukukhanga nokuthanda imizwa. Ixhoba le sipelo liqala ukubheka iintlanganiso kunye nomthengi, lubonisa umdla okhulayo. Kodwa i-privoroty ichaphazela kakubi i-psyche: into enempembelelo iba yintliziyo engalinganiyo, ibonisa ubugwenxa kunye nomona. Ukungquzulana kwamanye amazwe kunceda ekuphuhlisweni kwezilingo. Kwezinye iimeko, umlutha wotywala ubonakala. Unamandla ngakumbi kumelana nompopu, kunzima kuba yimiphumo yakhe.
EYiputa (ukubopha ngokwesondo). Isetyenziswe kumadoda atshintshe iqabane lawo. I-Rite kwi-flight plan ayivumeli ukuba ulalane nabanye abafazi. Ngenxa yoko - kukho umngcipheko omkhulu wokulimaza ukungabi namandla.
I-Zombie (eyenziwa nge-doll-volt okanye idini). Inempembelelo enamandla kumntu, ngokutshabalalisa ngokupheleleyo intando yakhe. Ngokuqhelekileyo kuqhutyelwa ukuphindiselela, kuba umphumo wayo oyintloko ukuthotywa komntu ngamnye. Ngethuba elifutshane (iinyanga ezi-1-3) kukho ukuthambekela kokuzibulala, ukuhlaselwa kobudlova, ukuxhomekeka kotywala.
Uthetha ngegazi. Basebenzela abantu abaqhelekileyo abangenabo ubuqhetseba. Icandelo longezwa ekudleni nasekunxileni, kubangela ukuba iimvakalelo zothando zithandeke. Unempembelelo enamandla, kodwa idinga ukuphindaphinda rhoqo (malunga nexesha eli-1 ngenyanga). Kukho iindlela ezimbini zokwenza le spell: igazi ukusuka eminwe kunye negazi leenyanga. Indlela yesibini inobungozi kakhulu: umfazi unokufumana iingxaki ezinzulu kwi-gynecology kuze kube yintsapho, amadoda anqwenela utywala, umona ongenangqiqo, iingxaki zempilo.
Indlela yokuphepha kwimiphumo yothando lokupasa
Faka isicelo sokunikwa kwintsebenziswano kwintsimi ye-esotericism kufuneka ibe yimeko ephezulu kakhulu. Akukho namnye kubo onokuqinisekisa ukuba ukhuseleko lwama-100% kwaye akukho miphumo. Xa udalela ukupasa ngothando, kufuneka ulandele ngokucophelela zonke iingcebiso zomlingo kwaye ungavumeli nayiphi na into eyenziwa ngumsebenzi. Ngaphezu koko, ungazami ngendlela yokuthanda umlingo ekhaya. Kufanelekile ukukhumbula ukuba kuzo zonke iimeko kukho uxhulumano olunamandla phakathi komthengi kunye nentshisekelo. Ngaphambi kokuba wenze ukupasa ngothando, kucetyiswa ukuba uhlole ngokwaneleyo imeko yangoku. Khumbula, phakathi kokuvumelanisa ubudlelwane bomtshato kunye nomnqweno wokuthatha indoda ngaphandle kwentsapho kukho umda omkhulu. Kwiimeko zokuqala, unokwenza nge-softvor privorotom emhlophe, eya kuba yinto enokunceda ukubuyisela uxolo kwintsapho. Okwesibini - kuphela ukupela okuluhlaza kumnyama kuya kunceda, okubandakanya umngcipheko omkhulu kwixhoba kunye nomthengi. Ubudlelwane obambelela ekuthandeni umlingo buya kuba nzima kwaye bubuhlungu. Ngezo zibini, zihlala zixakeke iingxaki zokuzala. Kodwa imiphumo emibi kakhulu ilinde umthengi, ukuba ixhoba libuyela kwi-psychic emva kokususa ukupela. Isithethe sokuhlanjululwa siya kulandelwa yinto ebizwa ngokuthi "ukubuyisela emuva". Unokubangela ukuhluleka okukhulu kwimicimbi yothando, izifo ezinzulu, iingxaki kunye nokulahleka okukhulu. Ukukhusela kule nto, unendlela eyodwa kuphela - ukubeka ukhuselo lomlingo lomlingo osebenzayo. Aba-Esotericists ngokwabo bayacetyiswa ukuba bacinge ngamanye amaxesha ngaphambi kokunyusa omnye umntu. Iingxaki ezininzi zingasombululwa ngokuqhagamshelana nenzululwazi yengqondo.
Iinkalo ezinomdla malunga nothando
Uthando lomntu lenza intombi ibe yinhle
Ndingathanda intombazana endala kunani
Iindlela zokunyamekela iinwele ezincinci
Capelin kwi-ukhilimu omuncu